Author: Gadaa Hunde
14th May 2018 10th September 2018 Gadaa Hunde	Leave a Comment
Tarree Mammaaksa Oromoo Kan akka fardaa nyaatu gaafa akka namaatti nyaate du’a. Garaacha dheedhii garaatti beeki. Midhaan warra raatuu bona bona nyaatu. Haadha hinqabdu hakkoof boossi. Keessumaa qamalee raafuu keessati argu. Hiyyeessa boo’icha hingorsani hinnuu jalleesee naqa. Sareen sarbaa hinqabdu mukarbaa hinyaabbattu. Gadheen qalbii hinqabdu kan darbe hinyaadatu. Kan lafatti wal hintaane muka waliin hinkoru. […]
Seensa Aadaan calaqqisiistuu maalummaa Uummata tokkooti. Uummatni tokko aadaa isaa keessaa saboota birootti, namoota birootti ykn naannoo birootti mul’ata; ibsama, darbees beekama. Dhugaa ifa galeessa ta’e kanaan, aadaa uummatni Oromoo gama hundaan qabu yoo ilaalle, Uummatni Oromoo aadaa hedduu maalummaa isaa ballinaan beeksisuu danda’an qaba. Haalli uumama dachee Oromoo mataan isaa itti fayyadama Aadaa Uummata […]
24th April 2018 8th May 2018 Gadaa Hunde	Leave a Comment
SABBOONUMMAA: Barruu kaleessaa katabe Osman Abdulatif sagaleetti jijjire. Galatoomi Haasaan Muummichi Ministeeraa Abiy Ahmad dhimma sabboonummaa Oromoo irratti kaase waan laaftutti laallee bira dabarru miti. Dogongora jechaas miti. Amma duras haasaya sabboonummaa Oromoo xiqqeessan haasayaa ture…irra dabarreef malee. Sabbonummaan ( nationalism) Oromoo ni miidhe moo ni fayyade waan jedhu garuu gadi buunee irra […]
Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page. Dabbasaa Guyyoo Saffarroo – Keenyaa keessatti as buuten dhabame dhabasaa Dabbasaa Guyyoo Saffaroo maanguddoo dhalataan naannaa Booranaa, Taltallee yoo ta’an Yaa’abal’otti guddatanii Dirree Liiban jjiraachudhaan waggaa dheeraf Gadaa Oromoo qorataa turan, nama gara ganna 80 ta’ani. Waggaa 35 […]
13th April 2018 8th May 2018 Gadaa Hunde	Leave a Comment
Hagayya 2, 2015 IBSA IJANNOO KALLACHA WALABUMMAA OROMIYAA (KWO) Ummannni Oromoo gabrrummaa jalatti erga kufee kaasee gaaf tokkollee tole jedhee gabroomfattoota Habashaa jalatti bulee hinbeeku. Ummanni keenna erga gabroomffattoonni balbala isaa gahanii kaasee humnna qabu hundaan lola ufirraa ittisuu (War of resistance) dabalatee gootummaadhaan diinota isaa falmaa ture. Qabsoo Ummata Oromoo haalli seenaa tokko tokko […]
8th April 2018 24th April 2018 Gadaa Hunde	Leave a Comment
Qabsoo Oromoo erga gaafa Oromoon cabee diina jala galeetii xawaalwaallummaan siyaasaa baduurraa dhaloota adhalootatti akka riqichaa walii daandii tahee as gahe. Osoo hin cabin haallii akkasii karaan ittiin eeganiifi ittisan sirni abbaa Oromoo waan tureef akkaan dhorkaafi eeggamaa ture. Jala bultii cabiinsa OROMOO jaarraa 18ffaa keessa kaasii hanga dhuma yoona jaarraa 21ffaatti nuwaliin jira. Dhaloonni […]
30th March 2018 31st March 2018 Gadaa Hunde	Leave a Comment
Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page. Amazing obbo lammaa magarsaa oromo tahuu barbaadumoo akka oromoon isaan tahu barbaadu 2018 Posted by Gadaa Hunde on Friday, 30 March 2018
29th March 2018 8th May 2018 Gadaa Hunde	Leave a Comment
Itoophiyaan imala jijjiiramaa irra…? Baay’ee kan dubbifame 1Filamuu Dr. Abiy Ahimad irratti miidiyaaleen hawaasummaa fi kanneen biroo maal jedhan 2Yamaniin waancaa Eeshiyaatif kan gahe leenjisaa lammii Itoophiyaa 3Itoophiyaan imala jijjiiramaa irra…? 4Chaayinaa fi Kooriyaan Kaabaa daawwannaa Kim Joong-un mirkaneessan 5Filannoo Masirii: Lammiileen Pireezidantii filachuufi 6Itoophiyaan Ministira Muummee haaraa muuduuf jirti […]
23rd March 2018 8th May 2018 Gadaa Hunde	Leave a Comment
Seenaa Goota Oromoo Jaal Elemoo Qilxuu Qabsoon bilisummaa ummata Oromiyaa, arra sadarkaa if duuba hin-deebinee fii abdachiisaa geeysee jirti. Dhuma bara 2015 irraa kaasee hamma yoonaatti, lammiin Bahaa-Dhihaa fii Kaabaa-Kibbaan mirga isaanii tiif anaannata bira dabranii xiqqaa fii guddaan dhiiraa fii dhalaan wareegamaa, caphaa, dhiigaa jiran. Wayyaaneen, warra waraana Dargiirraa boojitee fii abbootii garaa kanneen […]
Nadhii Gammadaa Nadhii Gammadaa (1955-) qabsaawaa mirga Oromoo fi miseensa ABO ture. Nadhii Gammadaa bara 1993 keessa bakka buutensaa kan dhabame yoo ta’u du’uu ykn mana hidhaa jiraachunsaa amma yoonatti hin mirkaneeffamne. Seenaa Duuba Nadhiin naannoo Oromiyaa aanaa Zuwaay Dugdaatti abbaasaa Hajiihusmaan Roobaa fi armeesaa Amiinaa Borseerraa bara 1955 dhalate. Maqaan dhalootaasaa Qaasim Hajiihusmaan Roobaa ture. […]
14th March 2018 24th April 2018 Gadaa Hunde	Leave a Comment
Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni omiishakee ormaafuu gaaddisaa Kan […]
13th March 2018 24th April 2018 Gadaa Hunde	Leave a Comment
UUMMATA OROMOO KEESSATTTI SABONUMMA AKKAMITTIN JABEESSUUN DANDA’AMAA? Boonsa Caalchisa irraa Sabonuuf diina uffiira rukkuuchuu danda’uu barbaachisadhaa. Namooni baayyeen hidhaamu, reebamuu… booda ni goodanu. Waani godhaani hin qaabani. Kaanimoo ni du’uu. Garuu namnii tokko lenjii qaabanaani, hergaa reebamee, hedhaame …boodale, namoota waayyaanee kudhaani galaafachuu hin dadhaabu yoo leenjii qaabatee. Kanaafi lenjii akkaattii qawee faayadamani barruun murteesadha. […]
11th March 2018 24th April 2018 Gadaa Hunde	Comment is Closed
Abbichuu [Mucaa] – Abbichuun kan dhalate godina Shawaa Kaabaa, Aanaa Warra Jaarsoo naannoo Dhaayee Sillaasee jedhamutti bara 1912 ture. Gosti Abbichuu ilmaan Tuulamaa sadeen kessaa Daaccii jalatti argama; Ilmaan Daaccii jalaa Galan; Ilmaan Galaan jalaa ammoo kan Warra Jaarsati. Abbaan isaa Bayyanaa Qorichoo dursaa lolee Warra Jaarsoo ture. Weerarri Xaaliyaanii bara 1929 akkuma jala gaheen […]
10th March 2018 24th April 2018 Gadaa Hunde	Comment is Closed
Dhaloota Fincilaa Ilmi Oromoo guyyaa mirgi abbaa biyyumaa isaa irraa mulqamee eegalee, didda inni yeroo adda addaan taasisu jabaataa deemuun isaa seenaan nu yaadachiisa. Qabsoo bilisummaaf godhamu kana keessatti hirmaannaan barattoota Oromoo bara 1970 eegale, gara humana jabaatti jijjiramuun Jaarmiyaa siayaasaa guddaa uummata Oromoo biratti kabajamaafi jaalatamaa ABO gad dhaabuun qabsoo hidhannoo finiinsuutti seene. Jaarmiyaan […]
7th March 2018 8th May 2018 Gadaa Hunde	Comment is Closed
Jechoota Safuu Oromoon manni yoo gubate manni gubate hin jedhanni gabbate jedha malee. Oromoon dubartii takka yoo ulfoofte dubartiin ulfoofte hin jedhu garaatti hafe jedha malee. Nama dubartii nama biraa gudeede irratti qabame tokko gudeede hin jedhan hammate jedhan malee. Jaarsa dogoggoreen doggorte hin jennu hin mucucattan jennaa. Daa’immni takka yoo dute, duute hi jedhamu […]
Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu (2) Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa (3) Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata(2) Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni omiishakee ormaafuu […]
Waaltina Afaanii! Afaan Oromoo erga afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa ta’ee waggoota 25 ta’eera. Afaan kanaan waajjiraalee garaa garaa keessatti ittiin hojjetama jira.Kitaaboleen barnootaa ittiin barreeffamanii afaan barnootaa ta’eera.Kitaaboleen asoosamaafi, seenaa,akkasuma hinbaayi’etin malee diraamaan,tiyaatirriifi fiilmiin Afaan Oromootiin hojjetamaa jiru. Afaan kun akka guddatee waaltinaa’uuf mootummaa naannoo Oromiyaa biiroo aadaafi turrizimii Oromiyaa giddu-gala aadaa Oromootti,gareen waaltina […]
Handhuraa Cattle Borena Location:Yabello, Borena, Oromia, Ethiopia Handhuraan: horii Aabban ilmee kennu akka Aadaa Oromoo Booranaatti. Handhuuraa Oromoon durii qabdi. Addunyaan ammoo dhiyoo erga baankiin dhuftee egalte (book account) daa’imii yoo dhalate banuufi. Handhuuraallen akkasuma yoo daa’immii dhalattu akkaata armaan gadiitiin horii dhuunfaa isaa keennaniif. Handhuuraan jechaa handhuura jedhu irraa dhufe. Handhuurti walakkaa nafa namaa […]
Barnoota Bu’uuraa:- Yaadaan bilshaachuufi beekumsa qabaachuun sochii hojii keenya guyyaa hundumaa keessatti baayi’ee barbaachisaadha.Dandeettii ogummaa erregaa( mathematics) qabaachuun ijoolleefi namoota gurguddaaf akkasumas hawaasa keessatti hojii hojjechuuf jireenya isaaniif barbaachisaadha.Dandeettii erregaa qabaachuuf carraaquun mana barnootaa keessatti milkaa’in fiduu danda’a.Ijoolleen utuu mana barnootaa hingalin beekumsa erregaa yoo qabaatan, yeroo mana barnootaa galan milkaa’ina isaanii argamsiisuu danda’a. Dhaabbati […]
Kana Beektuu? Biyyi addunyaa irraa yeroo jalqabaaf daldala garbaa mormitee akka dhaabbatu kan goote biyya – Ispeenidha Biyyi addunyaa irraa yeroo jalqabaaf adabbiin du’aa (death penality) akka hafu kan labsite biyya – Venezuweelaadha. Biyyi addunyaa irraa yeroo jalqabaaf qarshii waraqaa irratti maxxansiifte biyya – chayinaa (song dynasty) Biyyi addunyaa irraa yeroo jalqabaaf Teembira poostaa (post […]
Haala jijjiirama qilleensaa wajjiin deemuu fi Mala qonnaa Jahan(6) Jijjiiramni qilleensaa hojii qonnaarratti dhiibbaa guddaa qaba.Fakkeenyaaf caamsaa,lolaa, rooba yeroo malee roobuu kunniin hundi hojii qonnaarratti miidhaa fiduu danda’u.Qonnaan bultooti haaluma jijjiirama qilleensaa hubachuun hojii qonnaa isaanii wajjin haala deemuu danda’uun tooftaan hojjechuu danda’u.Tooftaa hojii qonnaarratti nama gargaaran kanaa gaditti mee haa ilaallu. 1. Sanyii Midhaan hongee […]
“Korma Sambataa” Bar- tokko biyya keenya keessa qonnaan bulaa tokkotu ture. Qonnaan bulaan kun, horii (lowwan) dhibbaa ol qaba ture. Waan kana ta’eef akka aadaa naannoo’saatti garaacha uffateera.Kunis mallattoo qabeenya guddaa qabaachuusaa kan argisiisudha. Qonnaan bulaan kun baruma baraan korma qalee nama waamee, sambata dhaabbata ture. Sababiin isaas Sambatni sooressa akka eeguuf, kan hin qabne’mmoo qabeenya kenna jedhee […]
14th December 2017 Gadaa Hunde	Comment is Closed
Gaafa Ibroo Shaxaa abbabayyuun Jaarraa AbbaaGadaa Lola Cirachaatti Waraana Misraa kan Ra,uuf Baashaatin hogganamuun odoo loluu weregame. Ilmi isaa Haamid dardara ture lola calanqoo booda bara 1889 keessaa bara mililik summii buna keessaatti naqeen Haamid Ibroo galaafatu ilmi isaa Ibraahim joolleesan booda bara 1936 keessaa Ibraahim haamid nafxeenyoota hawaasa baha oromiyaa sirna gabrummaa hanga […]
27th November 2017 27th November 2017 Gadaa Hunde	Comment is Closed
SEENAA MUHAAMMAD IBRAAHIM HUNDEE (BLUE HORSE BUSINESS MAN) – Sabboonaa, Bashaasha, Qabsaa’aa (Waraana Bilisummaa Oromoo (Jajjabee), Daldalaa fi Abbaa Qabeenyaa Dhugaatii Anniisaa qabu (Blue Horse Energy Drink owner) tiin beekama. Muhaammad Maatii Qonnaan Bulaa fi Horsiisee Bulaa, Abbaa isaa Ibraahim Hundee fi Haadha isaa Aadde Kuulii Tolaa irraa Godina Arsii Aanaa Roobee Saddiiqaa, Ganda Saddiiqaa, […]
13th October 2017 Gadaa Hunde	Comment is Closed
Akkuma hundii kenyaa senaa irraa hubannettii waggaa dhibba tokko duraa ummantii Oromoo ummataa biyyaa mataa isaa qabuu, Sarara dangaa bekkamaa kan qabuu fi Sirnaa dimokratawaa fi sirna dimocrasii hammayyaaf bu’ura kan ta’ee sirna gadaa jalattii kan bulu turee. Akkuma senaan dubattuttis yeroo sanatti ummatnii habashaa yeroo dheraaf qabenyaa Oromoo samichaa fi ummataa Oromoo balessuuf biyya […]
26th March 2016 10th September 2018 Gadaa Hunde	Comment is Closed
Waaqoo Guutuu SEENAA GABAABAA JENERAAL WAAQOO GUUTUU Gootichi Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu Usuu , Abbaa isaanii Obbo Guutuu Usuu Cammarrii fi haadha isaanii Aaddee Dhuulloo Alii Hasan irraa bara 1924 Ona madda- Wolaabuu lafa Oda jedhamutti dhalatan. Abbaan isaanii obbo Guutuun ilma dhiiraa (10) fi durba (9) wolumaa galatti ujoollee (19) qaban turan. […]
MIJUU TOO….. Mijuu too….. Qilleensa keessa kootii hargansuu somba kiyyaa, Dhuha lafee tootii dhiiga onnee tiyyaa, Surrii sammuu tootii qaroo ija tiyyaa, Sii waa mara kootii ati lubbuu tiyyaa, Qaama koo utubdee, Kakkabdee ol qabdee, Diriirsitee ol dhaabdee, Gaaddisa naaf taataa yoo aduun na gubdee, Bullukkoo naaf taata yoo qoorri na hubdee, Gubbaa koo uwwiftee, […]
MAKMAASSA Kaayyoon fuula kana MAKMAASSA OROMOO wali yaadachiisuu dha Sareen gadheen yoo diinni dhufee foon tortore itti darbate ni biriifatti Titiisaa jedhanii farsoo hin lagatan Baraa sitti hammate kaa abba kee ajjesee walin nyaadhuu, […]
24th March 2016 7th April 2016 Gadaa Hunde	Comment is Closed
At least 140 people have been killed in Ethiopia over the past two months in a crackdown on anti-government protests sparked by plans to expand the capital into farmland, Human Rights Watch (HRW) said Friday. “Security forces have killed at least 140 protesters and injured many more, according to activists, in what may be the biggest crisis to hit Ethiopia […]
24th March 2016 24th March 2016 Gadaa Hunde	Comment is Closed
Oromoo Waayyanen yakka Uummataa Oromoo irratti dalaga jiru atataman akka dhabu gaafana Mootummani wayyaneen ofuma isaatti rakko fi jeequmsa umee Oromoo Uummataa nagaa dhiigaa dhangalasa jira. Heera Federala diigun lafa Oromiyya humnan fudhachuuf murtesun isaa rakko umamee kanaaf sababa ta’uun isaa beekmadha.… Bara Baraan Miidhama Ummata Oromoon Guddina ofiif Hawwuun Gabroofattotaa Marraa Kana Xumura Itti […]
24th March 2016 10th September 2018 Gadaa Hunde	Comment is Closed
People: Oromo Country: Oromia (also phonetically spelled as Oromiyaa) Area: 600,000 sq.km approx. Capital: Finfinnee (also called Addis Ababa) Population: 30 million (1995 estimate) Language: Oromo, also called Afan Oromo or Oromiffa Economy: Mainly agriculture (coffee, several crops, spices, vegetables) and animal husbandry; mining industry; tourism trade; medium and small-scale industries (textiles, refineries, meat packaging, etc) Religions: Waaqqefata (the traditional belief in Waaqa or God), Islam, and Christian […]
Dhukkuba BUSEE Akkuma beekamu dhukkubni busee dhukkuba gammoojjii ti, garuu jabana kana iddoo tokko tokkotti giddu- galeessa gammoojjii fi baddaatti argamuutti jira. Addunyaa kana irratti waggaatti namootni miliyoonii 300 dhukkuba kanaan qabamu, namootni miliyoonni 3 ammoo sababa dhukkuba kanaatiin du’u. Biyya keenya keessattis bakka hedduutti namootni keenya dhukkuba kanaan qabamanii rakkataa jiru, du’us. Dhukkubni busee […]
WAA’EE UUMMATA OROMOO QUBA QABDUU 1. Warri Awurooppaa saba Oromoo ilaalchisee akkas jedhanii akka barreessan:“Sabni Jarmanii qaroomina Awurooppaatiif gahee guddaa gumaacheera, akkasumas sabni Oromoo guddinaa fi qaroomina Afrikaatiif gahee guddaa taphateeera”. 2. Umuriin sirna Gadaa dimookraasii Giriik waggaa 3500 oliin caaluusaa. 3. Sirna guddifachaa kan jalqaba uumee fi addunyaa kan barsiise Oromoota ta’uu isaa. 4. Sirna […]
24th March 2016 23rd March 2018 Gadaa Hunde	Comment is Closed
Sirna Gadaa Ummanni Oromoo aadaa bal’aafi dagaagaa ta’e heddu qaba. Kanneen keessaa aadaan Sirna Gadaa isa tokko. Gadaan sirna ittiin bulmaata ummata Oromooti. Sirni kunis bakka adda addaatti haala adda addaa qabaachuu nimala. Ta’uyyuu garaagarummaa irra tokkummaa isaatu caalee mullata. Fakkeenyaaf, kan gara Booranaa yoo fudhanne, sadarkaa ja’aafi sanaa ol qaba. Isaanis Kuuchuu, Raaba, Dabballee, […]
24th March 2016 24th April 2018 Gadaa Hunde	Comment is Closed
Seenaa Generaal Taaddasaa Birruu Gootichi beekamaan ilma Oromoo onneen isaa waa’ee saba isaaf dhiigdu kun kan dhalatee guddate Godina shawaa kaabaa nannoo salalee aanaa Hidhaabuu Abootee iddoo addaa Siree Morose jedhamutti dhalatee akka guddate seenaan tarree gootota Oromoo keessatti barreefame hedduun ragaa baha. J/Taddasaa Birruu akkuma ijoollee naannoo isaa biro ijoollumaan loon tiksaarra darbee umriin isaa yoo barnootaaf […]